Ngathi | I-Shijiazhuang (Yangzhou) iFayun Electric Co, Ltd.
Inkampani yaseShijiazhuang Fayun kunye neYangzhou Fayun Electric Inkampani ibizwa ngokudibeneyo ibizwa ngokuba yiFayun Electric Co, Ltd. Inkampani yaseShijiazhuang Fayun yasekwa ngo-2000, egubungela indawo engama-20,000 eemitha zesikwere, enendawo kwisixeko saseShijiazhuang, kwiphondo lase-Hebei e-China. Njengoko amashishini kuqhubeka ukuphuhlisa nokukhula, inkampani entsha egama Yangzhou Fayun Electric Companywas wamisa kwisixeko Yangzhou, kwiphondo Jiangsu of China ngo-2010, kunye nomthamo ebhalisiweyo million 50, ukuba indawo 30,000 square metres.
Inkampani yaseShijiazhuang Fayun yasekwa ngo-2000.
Inkampani igubungela indawo yeemitha zesikwere ezingama-30000.
Imveliso yethu yonyaka ye-Metal Oxide Varistors imalunga ne-1,500 yeetoni.
Iqinisekisiwe yi-IS09001: Inkqubo ye-2000 yoLawulo loMgangatho.
I-Fayun Electric Inkampani igxile kuphando nakwimveliso ye-Metal Oxide Varistors, i-Epoxy Fiberglass Rods / Tubes, Lightning Arresters, Composite Insulators, Cutout Fuses, njl. ukuya kutsho kwiitoni ezingama-800. Sikwavelisa ii-insulators kunye nokubanjwa kombane ngamaqhekeza angama-80 0000 ngonyaka.
Umgangatho bubomi beshishini
Kukho zonke iintlobo zezixhobo zokusebenza, uvavanyo olupheleleyo kunye nezixhobo zokuhlola kunye nenkqubo yokuqinisekisa umgangatho kwinkampani yethu. Zonke iimveliso zilupasile uvavanyo lweZiko laseTshayina lokuSonga nokuKhanyisa iZiko lokuHlolwa koMgangatho. Ikwaqinisekisiwe yi-IS09001: Inkqubo ye-2000 yoLawulo loMgangatho. Abathengi bethu bahlonipheke besuka eFrance, eRashiya, eRomania, eSlovenia, eIndiya, eViet Nam ect. Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kumandla ombane, amashishini ekhemikhali, uloliwe, i-colliery, ukuthuthwa komoya kunye nokuhanjiswa kolwandle. Inkampani ibambelela "kumgangatho wobomi beshishini" ingqikelelo yomgangatho, ingqalelo kwiimfuno zentengiso, imithetho nemimiselo, ukubonelela abathengi ngeemveliso kunye neenkonzo ezonelisayo.
Ngokuyila izinto ezizimeleyo kunye nophuhliso oluzinzileyo, inkampani iya kuthatha iibhloko ze-zinc oxide / ifayibha ye-fiberglass njengeyona nto iphambili, ithathe umbane / i-insulators edibeneyo njengesiseko, kwaye yenze ishishini lezixhobo zamandla libe likhulu kwaye lomelele. Ngokusekwe kuyo, siya kusebenza nzima ukuzama ukusebenza kwemveliso kunye nokugqibelela kwemveliso. "Ukwenza izinto ngokuchanekileyo, ukwenza izinto kakuhle, ukwenza umsebenzi wobuvulindlela, ukwenza inkqubela phambili, ukwenza izinto ezintsha" kuhlala kungumoya weshishini. Bonke abasebenzi baya kuba ngokuhambelana "nomgangatho wokugqwesa, ukwaneliseka kwabaxumi, ukuphucula okuqhubekayo kunye nokufuna ukugqwesa" umgaqo-nkqubo osemgangathweni, kwaye ngokuqhubekayo baphucula inkqubo yolawulo lomgangatho. Kwangelo xesha, bamkele ngokunyanisekileyo abahlobo beshishini abavela kwihlabathi liphela ukuba batyelele umzi-mveliso wethu ngentsebenziswano engaphezulu, dibanisa izandla ngokuphumelela. UFayun Electric ujonge phambili kwishishini elihle, elizinzileyo eliqhubekayo nawe, ngokunyanisekileyo.